गुल्मीका फेरि कोरोना संक्रमण तिव्र, यि हुन् रेड जोनमा रहेका ६ पालिका - Gulminews
गुल्मीका फेरि कोरोना संक्रमण तिव्र, यि हुन् रेड जोनमा रहेका ६ पालिका
२०७८ आश्विन २२, १६:२१
गुल्मी, २२ असोज । कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण कैयौले ज्यान गुमाए । आर्थिक तथा समाजिक रुपमा ठुलो क्षति पुग्यो । अहिले पनि कोभिड–१९ संक्रमणले ज्यान जानेहरुको संख्या दैनिक थपिएको छ । तर, राजनैतिक चेत भएकाहरुनै अचेत छन् । यात्रा खुलेका छन् । राजनैतिक र साँस्कृति जात्रा रोकिएका छैनन् । स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउनेहरुको संख्या कम हुँदै गएको छ । चोक, चौतारो र बसपार्कहरुमा माक्स प्रयोग शुन्य छ । सवारी साधनमा पनि यात्रु बिना माक्स चढ्छन् । न चढ्नेलाई मतलब न चढाउनेलाई । दलका तमासा तारे होटलदेखि गाउँसम्म बढेका छन् । तर, स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीका अनुसार पछिल्लो साता कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको छ । बिहिबारसम्म जिल्लामा सक्रिय कोरोना संक्रमित ४ सय ५९ पुगेका छन् ।
गुल्मी अस्पताल र स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरुमा भर्ना हुन थाले । समस्या जटिल भए बढिमा १० जना थेग्ने अस्पताल जिल्लामा छैनन् । दशै सवैको घर आगनमा आइपुग्यो । कसरी दशै मनाउने, के खाने, कहाँ जाने ? आम मान्छेका आशा र योजना छन् । दललाई कार्यकर्ता भेटघाट, सभा सम्मेलन र गुट रिझाउने चिन्ता छ । क्लव तथा संघ संस्थाले पनि विभिन्न खेल र सास्कृति मेला महोत्सवको मौका अहिलेनै छोपेका छन् । जनसंख्याको आधारमा धेरै गुल्मेलीले खोप पाएका छैैनन् । बिद्यालयमा बालबालिका बिरामी परेर बेहाल छन् । बालबालिकाको भविष्य की ज्यान ठुलो । अभिभावक उत्तर दिन सक्दैनन् । बिज्ञहरुले तेस्रो लहर बालबालिकाको लागि खतराजनक भनेकै छन् ।
भोली चिच्याएर, कराएर र हत्केलाले आँसु पुछेर पनि परिस्थती अनुकुन नहुने दिन आउनेछ । बिहिबार कोभिड–१९ व्यावस्थापन समितिको बैठक बस्यो । मुख्य छलफल दशै, मेला महोत्सव र कोभिड १९ संक्रमणको अवस्थाका बिषयमा केन्द्रित रह्यो । सवैले राय राखे । कोभिड संक्रमणको बिषयमा प्रहरी प्रशासन, स्वास्थ्य कार्यालय र अस्पतालबाट गम्भिर सुझाव आउँछ । केहि स्थानीय सरकार प्रमुख त्यसलाई मजाक पनि सम्झिए । सवैका आफ्नै ताल आफ्नै डम्फु । अवस्था प्रस्तुत गर्ने सरकारी निकाय र थप गम्भिर बनाउने नागरिक समाज र पत्रकारनै बरु निकम्मा जस्तै बने । मुख्य दलहरु पनि बोलेनन् । किन की राजनैतिक भेलाका कार्यतालिका बिग्रने स्थिती रह्यो । व्यावसायी बोल्दा व्यापार चौपट । पत्रकार बोले मुखाले । भोलीकै दिनबाट हेरौ परिस्थीति बुझेर दलहरुले आफुलाई सच्याउँछन् की नाई ? आफुलाई देखाएर नागरिक कन्भीन्स गर्न सकुन् ।
६ पालिकामा रेड जोनमा
संक्रमणको हिसाबले जिल्लाका ६ स्थानीय तह रेड जोनमा छन् । स्वास्थ्य कार्यालयका निमित्त प्रमुख पशुपति आचार्यका अनुसार रेसुंगा नगरपालिका, धुर्कोट, इस्मा, गुल्मीदरवार, छत्रकोट र रुरु क्षेत्र गाउँपालिका सवैभन्दा धेरै सक्रिय संक्रमित छन् । रेसुंगामा ४८, धुर्कोटमा ४९, रुरु क्षेत्रमा ९२, छत्रकोट ८१, इस्मा ७२, गुल्मी दरवारमा ३५ जना कोरोनाका संक्रिय संक्रमित रहेको आचार्यले जानकारी दिए । उनले कोभिड संक्रमणको अवस्था अझै धेरै भएपनि परिक्षण छैन् । पछिल्लो साता सत्यवति र चन्द्रकोट गाउँपालिकाले एन्टिजिन परिक्षण नै नगरेको बताए ।
कोभिड १९ व्यावस्थापन समितिका निर्णयहरु
कोभिड १९ व्यावस्थापन समितिले निशेधाज्ञाका पुर्वबत् निर्णयहरुलाई कायम गरेको छ । मन्दिरहरुमा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर नियमित पुजा गर्ने र भाकल दिने निर्णय गरेको छ । मन्दिरमा दर्शक उपस्थित गराउन पाइने छैन् । त्यो बाहेक सराँयसहित अरु कुनै पनि ठुला मेला महोत्सव, जात्रा, उत्सव, खेल र भेलाहरु नगर्ने निर्णय गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्यबिक्रम पौडेलले बताए । उनले जीवन रहे अर्को साल पनि मेला पर्व र उत्सवहरु हुने भएकाले कोभिड संक्रमणको स्थितीलाई हेरेर निर्णय गरिएको बताए । उनले निर्णय उल्ङघन गर्नेलाई रोग संक्रामक ऐन अनुसार कारबाही गरिने बताए । त्यस्तै सवारीधनीले यात्रुलाई अनिवार्य माक्सको प्रयोग गर्न लगाउने र माक्स बिना यात्रु राखेको भेटिएमा प्रहरीले तत्काल कारबाही गर्ने प्रहरी प्रमुख एसपी गोपालचन्द्र भटराईले जानकारी दिए । उनले यात्रु र सावरीधनी दुवै सजग र सचेत रहन आग्रह गरे । त्यस्तै संक्रमणको लक्षण् भएका व्यक्तिहरुलाई स्थानीय तहले एन्टिजिन परिक्षण गर्ने, समुदाय र परिवारमा कसैलाई लक्षण भए पालिकालाई खबर गर्न बैठकले आग्रह गरेको छ ।
पक्कै समय अनुकुल छैन् । म पनि कोभिड संक्रमणको राम्रै अनुभव गरेको मान्छे हुँ । म त ठिकै छु, नी । ज्यान त जोगाएँ । परिवारमा कसैलाई केहि भएन् । एकचोटी सम्पति सकिएर पनि घर नफर्किएकाहरुको परिवारमा पुगौ न । छोराछोरीले दशै भन्लान की बाबा । बाबाले दशै भन्छन् की छोराछोरी । कोभिडले चुडेका अभिभावको सम्झनामा कहिल्यै मुस्कुराउन नसक्ने परिवारका सदस्य भएर मानसिकता बदलौ । स्वार्थ केन्द्रित निर्णयले नागरिक संक्रमित भए भने नेता ज्यू त हेलिकप्टर चढेर काठमाण्डौ पुग्नुहोला । तर, बिपन्न नागरिक मरे भने छिमेकीले समेत थाहा पाउँदैनन् ।
आम नागरिक आफैले पनि सोँच परिवर्तन गरौ । घरमै दशै मनाउँ । सकेसम्म भेला पनि छोडौ मेला पनि । मर्दा जन्म दिने बाआमाले त एक थोपा पानी राख्न पाएनन । जीवन संगीनीले कात्रो उघार्न सकिनन् । छोराले दागबत्ति दिन पाएनन् । सवै अनुकुलतामा बुई चढ्ने हुन् । सोच्ने बेलामा हो । जमना तर्कनेका छन् । केहिबेरलाई सिडियो कसैलाई दोषि देखाएर तर्केलान, जनप्रतिनिधीले पनि कसैलाई दोष देखाएर उम्केलान ।
प्रहरी, पत्रकार, सरोकारवाला एवं आम नागरिक पनि । जीवन सवैभन्दा अमुल्य कुरा हो । आफु बाँचे न परिवार, दशै, मेला महोत्सव हो । कसैलाई कारण देखाएर जिद्धि नगरौ, स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाऔ । नव दुर्गा भवानीसंग अरु फेरि मागौला अहिले संक्रमणलाई परास्त गर्ने आर्शिवाद मागौ । दशै घरमै सिमित गरौ । सवैलाई बिजयादशमीको शुभकामना !